दूध र दही सही प्यानकेकहरू लागि नुस्खा
तपाईं सिद्ध प्यानकेकहरू लागि नुस्खा थाहा छ? पक्कै पनि धेरै Housewives भन्यो मिठाई को तयारी को विधि परिचित छन्। तपाईं कति सुन्दर र बनाउन थाहा छ भने दही गर्न पातलो प्यानकेकहरू र दूध, त्यसपछि हामी वर्तमान लेखमा यो कुरा गर्नेछौं।
दूध सही प्यानकेकहरू लागि चरण नुस्खा द्वारा चरण
त्यहाँ एक विशाल मात्रा हो यस्तो मिठाई तयार लागि विधिहरू। तर हरेक महिला कसरी हो कि लज्जित छैन नै, चिल्लो राम्रो र गुलाबी लेख पनि उत्सव तालिका लागू गर्न के गर्न थाह छ। त्यसैले, प्रश्न लेख, हामी यस विशेष विषय समर्पित गर्न निर्णय गरेका छौं।
घरमा रूपमा प्यानकेकहरू लागि आदर्श नुस्खा महसुस गर्न? स्वादिष्ट र सुन्दर उत्पादनहरु को तयारी को लागि खरिद हुनुपर्छ:
ताजा गाई दूध (उच्च बोसो प्राप्त) - 750 एमएल;
अण्डा औसत मूल्य -2टुक्रा;
प्रकाश देखि गहुँको पीठो - विवेकमा (इच्छित स्थिरता सम्म थप्न);
सेतो चिनी - लगभग 20 ग्राम (आफ्नो स्वाद मा खन्याउन);
सूर्यमुखी तेल - जग को र एक कराइ मा उत्पादन frying लागि दुई ठूलो चम्मच;
पाक पाउडर - बारे 5-7 G;
तालिका नुन - तपाईँको लिङ्कमा।
एक तरल पैनकेक कुटपिट बनाउन
कसरी सही तयार प्यानकेकहरू लागि आटा? नुस्खा यस्तो उत्पादनहरु को एक क्लासिक छ। उचित सानना आधारमा तिनीहरूले, नाजुक पातलो र धेरै स्वादिष्ट प्राप्त।
त्यसैले, तरल पैनकेक आटा ताजा दूध को तयारी को लागि एक गहिरो कचौरा मा हालिएको छ, र त्यसपछि अन्डा थप्न। प्लग मार्फत सामाग्री Whisking, सेतो चिनी खन्याउन र नुन धेरै ठूलो छैन। मसला भंग गर्न, परिणामस्वरूप ठूलो केही समय मार छ। अर्को उहाँलाई एक सानो सूर्यमुखी तेल र sifted पीठो र पाक पाउडर राख्नु बाहिर।
सामाग्री सामान्य चम्चा हलचल, राम्रो कुटपिट प्राप्त। therein गठन पीठो गांठ को वाहेक को परिणाम भने, यो लगभग 25 मिनेट लागि छुट्याइएको खडा सिफारिस गरिएको छ। यो समय पीठो पूर्ण नरम हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ, र फोहर गांठ गायब।
एक कराइ मा प्यानकेकहरू Frying
कसरी ठीक सिद्ध प्यानकेकहरू तलना गर्न? फोटो संग नुस्खा विशेष व्यञ्जन को प्रयोग आवश्यक छ। भनेर स्टक मा छैन छ भने, तपाईं नियमित बाक्लो-पर्खालले घेरिएको पैन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक बलियो आगो राख्नु, र एक सानो तेल, राम्रो न्यानो नपुगेको। कि पछि, एक सूप करछुल आटा प्रयोग बिस्तारै कचौरा बाहिर राख्नु। यो एक परिपत्र गति मा मनमोहक बनाउने।
बित्तिकै आटा को कराइ हुनेछ, यो तुरुन्तै विभिन्न दिशामा ढल्केको थियो। यो सब्सट्रेट समान पैनकेक फ्लैट, गोलो र पातलो बनाउने, तल मार्फत वितरण हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न छ।
माथि सुक्खामा छैन - तलना यस फारममा मिठाई उत्पादन आफ्नो तल पक्ष गुलाबी छैन, र शीर्ष रूपमा लामो हुनुपर्छ। मात्र त स्पाटुला प्रयोग गरेर, पैनकेक फ्लिप। पछि समय मिठाई समान रकम तला।
प्रस्तुत स्वादिष्ट प्यानकेकहरू नास्ता लागि
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, महसुस गर्न प्यानकेकहरू लागि आदर्श नुस्खा एकदम सरल छ। तिनीहरूले दुवै पक्षले browned भएपछि, एक प्लेट तिनीहरूलाई फैलाउन र ताजा घिउ (मलाईदार) संग गंदा। यो मिठाई दिनेछु एक विशेष स्वाद मात्र र तिनीहरूलाई थप उच्च क्यालोरी बनाउन छ, तर दिन छैन प्यानकेकहरू प्रत्येक अन्य संग सँगै छडी।
तालिका यो घर उपहार सेवा तातो सेवा गर्नुपर्छ। यो मीठो सस, साथै जामुन र फल को एक किसिम संग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सही प्यानकेकहरू लागि नुस्खा kefir संग
आत्म-स्वादिष्ट घर प्यानकेकहरू लागि दूध, प्रयोग गर्न सकिन्छ र सादा दही बाहेक। यसलाई आफ्नो मिठाई यो किण्वित दूध पेय संग अझ कोमल हुनेछ उल्लेख गर्नुपर्छ। हामी दही संग तयार उत्पादन, एक सुखद अम्लता र एक सानो dampness सधैं छ भनेर भन्न सक्दैन।
त्यसैले हामी प्वालहरू भएको प्यानकेकहरू लागि आदर्श नुस्खा महसुस गर्न आवश्यक सामाग्री के हुन्? यसो गर्न तपाईंले खरिद गर्नुपर्छ:
दही मध्यम तेल -2कप;
अन्डा सानो -2टुक्रा;
गहुँ प्रकाश भोजन - विवेकमा थपियो;
सूर्यमुखी तेल - frying उत्पादनहरु लागि;
चमचा बेकिंग सोडा - 1 जूनियर सानो चम्चा;
नुन धेरै ठूलो Cookbook छैन - आफ्नो स्वाद अनुसार;
cooled उसिनेर पानी - बारेमा 2/3 कप।
kefir मा पैनकेक आटा खाना पकाउने
हेरिएको आदर्श नुस्खा प्यानकेकहरू धेरै अक्सर थोडा अम्लीय र dampish मिठाई प्रयोग गर्न रुचि गर्नेहरूलाई प्रयोग। यो घर मा तयार गर्न, एक किण्वित दूध उत्पादन एक कचौरा मा हालिएको छ, त्यसपछि अलिकति खुसीले गदगद कम गर्मी मा (अप जोडीलाई स्थितिको)। यस अर्को बेकिंग सोडा र एक राम्रो चलाउनु थपिएको छ।
को बलियो प्रतिक्रिया एक कचौरा मा पूरा भएपछि, एक डेयरी उत्पादन नुन र चिनी खन्याउन। पनि गर्न चिकन अन्डा थपियो।
तिनीहरूलाई मा एक हल्का भोजन खन्याउन एक साधारण चम्चा प्रयोग गरेर सामाग्री पुन मिश्रण, बिस्तारै। रूपमा लामो तपाईं एक एकदम viscous आटा गठन छैन रूपमा हुन यो उत्पादन थप्नुहोस्। तपाईं पातलो crepes, प्यानकेकहरू र बाक्लो गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सुरक्षित तिनीहरूलाई frying सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं क्लासिक प्यानकेकहरू रुचि राख्नुहुन्छ भने, जग थप तरल हुनुपर्छ। यो चिसो उसिनेर पानी हालतमा गर्नुपर्छ।
गर्मी उपचार प्रक्रिया
आदर्श वनस्पति तेल मा frying प्यानकेकहरू हुन। यो एक बाक्लो-पर्खालले घेरिएको पैन प्रयोग गर्न आवश्यक छ, तपाईं उच्च गर्मी अग्रिम गर्मी गर्न चाहन्छु।
को पैनकेक आटा को एक कचौरा प्रसार मा, एक पटक तातो तेल मा सेतो धुवाँ प्रकाश हुनेछ। तिनीहरूले अघिल्लो नुस्खा मा वर्णन रूपमा ठ्याक्कै त्यही बाटो मा गर्छन्। Kefir आटा एक करछुल scoop, र त्यसपछि त विभिन्न दिशामा ढल्केको छ जो पैन मा एक परिपत्र गति मा फैलियो।
को cookware को तल वरिपरि आधार वितरण, यसलाई प्वालहरू मा माथिल्लो पक्ष सम्म तलना र सुक्खा ढाकिएको। त्यसपछि मात्र उत्पादन उल्टो छ र बिस्तारै यस्तै तलना।
पैन देखि समाप्त पैनकेक हटाउँदै, यो ताजा घिउ संग गंदा पर्छ। तपाईं स्टक मा छैन तेल खाना पकाउन भने, तपाईं वनस्पति तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पैन मा प्रत्येक आटा बाहिर बिछाउने अघि सूर्यमुखी तेल यसलाई गंदा।
कसरी परिवार खाने लागि पूर्ण प्यानकेकहरू लागू गर्न?
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, त्यहाँ प्रश्न उत्पादन खाना पकाउने मा कठिन केही छ। सबै प्यानकेकहरू तला र घिउ संग गंदा छन् पछि, सुन्दर प्लेट एक ढेर मा फैलियो। तालिकामा एक मिठाई चिया र केही सिरप प्रस्तुत। तपाईं आफ्नो परिवारको सदस्य चकित गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई जामुन र फल को प्यानकेकहरू स्लाइस सजाउनु, र धुलो चिनी तिनीहरूलाई छिडकना सुझाव दिन्छौं।
बारबेक्यू लागि राम्रो marinade: नुस्खा
को जाडो लागि बैगुन खाना पकाउने
Sauerkraut: फोटो मेरो हजुरआमाको नुस्खा
नासपाती जाम - एक वास्तविक मज्जाको
स्वादिष्ट र स्वस्थ चुकंदर स्ट्यु
केक, केक र चकलेट: चेरी संग आँटा
कसरी यस्तो आहार गर्न adhering द्वारा वजन गर्न: शक्ति अलग के छ
"मिमोसा star name" कसरी तयार: केही भिन्न संग सार्डिन माछा नुस्खा
स्नेहक र औद्योगिक तरल पदार्थ
क्रोएसियाली स्ट्राइकर निकोला Kalinic
जुम्रा उन्मुक्ति कसरी
रासायनिक तत्व को धातु गुण
Tinsmith दिन - बाँकी बिना छुट्टी
टेलर Momsen (टेलर Momsen): जीवनी, Filmography र व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
"इन्टरनेट लार्ज", "मेघाफोन": महसुल विवरण, सेवा र प्रशंसापत्र। असीमित इन्टरनेट "मेघाफोन" - "इन्टरनेट लार्ज"
सिर्जना अनलाइन स्टोर